Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop Qaybta 2 | Abuurista khadka tooska ah
Antonio L. Carter | | General, Photoshop, Tababarada, dhowr
Hadda waxaan bilaabaynaa inaan si toos ah uga shaqeyno sawirka, si gaar ah, ka hor inta aan la bilaabin xariiq-farshaxan kaas oo aan u soo gudbineyno sawirkeena, waxaan ku bilaabi doonnaa nadiifinta shiraaca halka uu ku yaal sawirkeenu. Aynu ku bilowno Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop (qeybta 2aad).
Qoraal hore oo tan ah tutorialin Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradeena Adobe Photoshop (qeybta 1-aad), Waxaan aragnay sida loo sawirayo sawirka qalinkeena iyo feylka aan u badalno. Hadda waxaan bilaabi doonnaa u diyaarinta khad iyo midab.
1 Abuuritaanka dukumiinti cusub
2 Nadiifinta sawirka
3 Xulashada dhoofinta
4 Waxaan bilaabaynaa inkiro
Abuuritaanka dukumiinti cusub
Waxaan abuureynaa a dokumenti cusub, oo waxaan u sameyn doonnaa sidii inaan u daabacayno sawirka markii la soo saaray, tanna waxaan u fureynaa dukumiinti cusub (Ctrl + N) iyo sanduuqa xulashada ee soo baxa, waxaan ku dooran doonnaa warqad caalami ah, A5, oo waxaan aadeynaa sanduuqa qaabka midabka oo aan dooran doonaa Grayscale. Marka tan la dhammeeyo, waxaan furi doonnaa dukumintiga cusub.
Kahor inta aan loo soo dhoofinin sawirka si aad u shaqeyso, waxaan ka soocidoonaa asalka halka uu ku yaalo, taas oo noqon doonta warqad wasakhaysan oo aan sawir ka bixinaynin. Si tan loo sameeyo, sawirka aan soo jeedinayo tusaale ahaan, waxaan u isticmaali doonaa aaladda xulashada Xidh Magnetic, oo waxaan ku tilmaamayaa shaxdeeda xariiqdeeda, anigoo hagaya xerin sida ugu wanaagsan ee aan kari karno. Dhawaan, waxaan samayn doonaa hal-qoris halkaas oo aan ka hadli doono oo keliya qalabka xulashada Adobe Photoshop. Marka sawirka oo dhan lagu sharaxay aaladda xulashada, waxaan hubin doonnaa inaan ka tagno nusqaamaha ka madax bannaan sidoo kale la xushay, taas oo ah, in la abuuro muuqaal muuqaal ah oo shaxanka ah.
Markii aan isku shaandheynay, waxaan u dhaqaaqnay waddadii Xulista- Sifee Edge. Sanduuqa wadahadalka ayaa furmi doona, halkaas oo aan wax yar ka sifeyn doonno (waqti badan kuma qaadan doonno tallaabadan sidoo kale, waa kaliya si aanan lumin macluumaad badan oo ku saabsan geeska sawirka) xulashada waan ku jirnaa. Gudaha sanduuqa wada hadalka, waxaan ku dooran doonaa nooca aragtida ee loo yaqaan Ku saabsan Madoow, halkaas oo aan sifiican ugu arki doonno qaybta khadka aan lumineyno. Waxaan dhaqaajiyaa sanduuqa Smart Radio oo waxaan ku dabaqaa qiyaasta 'Adjust edge values', anigoo isku dayaya sida ugu macquulsan in khadka ka baxsan sawirka uu ilaaliyo qaabkiisa oo uusan lumin macluumaad badan. Tan waa inaan u isticmaalnaa qiyamka Gowork, Isbarbar dhiga iyo Edge Shifte si waafaqsan, u xakamaynta qaabkan oo khadka tooska ahi had iyo jeer yahay mid fiiqan oo aan kala go 'lahayn. Mar alla markaan si qanac leh u qeexno sawirkeena, waxaan riixnaa toobiye kumbuyuutarka Ctrl + J, sidaas darteed abuurista lakab cusub oo xulashada horey loo gooyay. Guji thumbnail ee lakabka halka jaantuska horey loo gooyay si loo xusho oo waxaan gujineynaa nuqul.
Markaanu koobiyaynno nuxurka lakabka, waxaan u nimid dukumiintiga cusub ee aan furay oo aan ku garaacnay. Dukumiintiga cusub ee aan ku xasuusinayo waa inuu noqdaa A5 warqad caalami ah oo ku socota 300 dpi resolution, oo leh asal cad. Markaan helno lakabka la dhoofiyo, wuxuu ku imaan doonaa qaab ahaan Shay aan u qalmin, Waxaan lakulmeynaa lakabka (adigoo si sax ah u riixaya lakabka oo aan siineyno ikhtiyaar ikhtiyaariga ah) waxaanan sii wadaynaa inaan kuxirno asalka cad. Waxaan abuureynaa koox aan ugu magac dari doonno qalin qalin oo waan nuqulan doonaa. Waxaan u wici doonnaa kooxda cusub Weydiiyay, waxaanna abuureynaa lakab cusub oo aan ugu magac darayno Khad 1 dusha koobiga Sawir qalin, kaas oo aan ugu magacdari doonno Inkab 2. Waxaan damineynaa bandhiga kooxda ay kujiraan Sawir qalin, adiga oo gujinaya isha leh kooxda lakabka ee ku xigta thumbnail-keeda lakabyada lakabyada oo annaguna waxaan dooranaynaa kooxda Weydiiyay iyo daboolka Khad 1 si loo bilaabo raadinta cirbadda dusheeda ku taal.
Waxaan bilaabaynaa inkiro
Waxaan ku taaganahay lakabka Khad 1 Sidii aan soo sheegnay, iyo halkan wixii ka bilowda waxaan bilaabi doonnaa soo saarista gelitaanka sawirka. Waxa ugu horeeya ee aan kuu sheegi doono inaan sameyno iyadoo la isticmaalayo qalabka Calool lagu daro qalabka Caday, hab aad u fudud oo wax ku ool ah oo loogu shaqeeyo khaanadaha. Marka horeba, waxaan nidaamineynaa cabirka Caday, tan waxaan u dooran doonaa qalabka Caday oo waxaan si sax ah u riixi doonnaa sawirka si aan u galno guddiga xulashada qaabka iyo cabirka aaladda. Marka aan ku jirno guddigaas, waxaan doorannaa burush leh cidhif adag oo aan kala sooc lahayn, waana dhigeynaa 5 px cabir ahaan
Markaan dooranay cabirka burushka, waxaan aadeynaa aaladda Calool, oo waxaan bilaabi doonnaa inaan raad ka dhigno mid ka mid ah khadadka sawirka.
Markaad khad horey uheshay, waxaan saxnaa guji oo waan sameyn doonnaa Wadada istaroogga, halkaasna waxaan ka siinnaa buraashka, ka tagista ikhtiyaarka oo la riixay Cadaadiska iska dhig.
Si aad u yar ayaanu u dardaarmi doonaa khadadka sawirka ee lakabka Khad 1, tartiib tartiib ilaa aad kaheleyso tirada guud.
Casharka xiga ayaan ku dhamayn doonnaa khad sawirka, iyo tan xigta ee aan bilaabi doonno midabayn. Ha moogaan
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Sida loo qurxiyo loona qurxiyo sawiradayada Adobe Photoshop (qeybta 2aad)
Windows 8 tuuryo gaaban dijo
mid walbaba, runtiina waa ii fiicantahay aniga inaan booqdo tan
goobta, waxaa ku jira Macluumaad waxtar leh.
Kajawaab toobiyeyaasha kumbuyuutarka ee Windows 8